Isbitaalka dhexe ee Cadaado oo mishinada wax lagu baaro loogu deeqay “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Isbitaalka dhexe ee Cadaado oo mishinada wax lagu baaro loogu deeqay “SAWIRRO”
Munaasabadan maamulka Isbitalka dhexe ee Cadaado lagula wareejiyay qalabkan caafimaad ayaa waxaa ka soo qaybgalay bahda caafimaadka, mas’uuliyiin ka tirsan Ximan iyo Xeeb iyo qaybaha kale ee bulshada.
Dr Maxamed Cumar Yuusuf Agaasimaha Isbitalka ayaa munaasabadda ka sheegay in Qalabkan oo ka kooban ilaa 4 Mishin, dawo iyo waxyaabo kale loo adeegsan doono in lagu baaro Keliyaha, wadnaha, Beerka iyo dhammaan dhiiggaga iyo dhammaan waxa baaritanada uur ku jirta la xiriira, oo horay baaritaanadooda aysan qalab ku haboon aysan u haysan, isagoo xusay in ay muhiim u yahay qalankan hawsha Isbitalka.
C/qaadir Sayid Axmed oo ka socday hay’adda qalabkan caafimaad ku deeqay ee Hayat ayaa sheegay in sanadkii 2014-ta horaantiisii Farxan Maxamed Dhoore oo hay’adda ka tirsan uu soo arkay qalabka uu ku shaqeeyo Isbitalka ayna muhiim noqotay inay qalabkan soo gadaan, maanta Isbitalku ku shaqaynayo.
Wasiirka arrimaha bulshada ee Maamulka Ximan iyo Xeeb Cumar Maxamed Diiriye qaynta qalabkan shaybaarka la dhigay xariga ka jaray ayaa u mahadceliyay qurbajoogtii dadaalkan bixisay.
Qalabkan shaybaarka ee lagu soo kordhiyay Isbitalka dhexe ee Cadaado ayaa meesha ka saaraya baahida ay bukaanada qaarkood u aadi jireen dalka dibadiisa ama gobolo fog fog oo dalka ka mid ah.